Yaa Ku Faa’idaya Xil Ka Qaadista Kheyre? | Xaqiiqonews
Yaa Ku Faa’idaya Xil Ka Qaadista Kheyre?
su’aasha ugu muhiimsan waxa ay tahay, yaa ku faa’idaya xil ka qaadistan?
Gelinkii hore ee sabtiga, gudoomiyaha Barlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal ayaa ku dhawaaqay go’aan kadis ah ka dib markii uu sheegay in cod aqlabiyad leh ay barlamaanka ku meel mariyeen kalsooni kala noqoshada ra’iisal wasaarihii xakuumadda Xasan Cali Kheyre.
Wararka ayaa sheegaya in Madaxweynaha uu si ku meel gaar ah ra’iisal wasaare ugu magacaabay Mahdi Guuleed oo xilka sii heyn doono inta laga soo dooranaayo ra’iisal wasaare cusub.
Ma aheyn arin la fogeysan karo, iyadoo la ogyahay in bilihii ugu dambeeyey uu jiray kala shaki soo dhaxgalay madaxweynaha iyo ra’iisal wasaaraha, kaasi oo sida khubarada aaminsanyihiin sii xogeysatay bilowga sanadkani aynu ku jirno ee 2020.
Marka arintaasi laga soo tago, waxaa jira shakiyo badan oo ku hareereysan, go’aanka xigga ee barlamaanka, hogaamiyaasha mucaaradka ayaana ku doodaya in Madaxtooyada iyo Barlamaanka u sii qoryo guranayaa “muddo-kororsi”.
Sidoo Kale Aqri..Sheekadii Jaceyl ee Farmaajo iyo Kheyre oo Gabogabo ah
Laakiin su’aasha ugu muhiimsan waxa ay tahay, yaa ku faa’idaya xil ka qaadistan?
Dhamaan tilmaamaha iyo cadeymaha xogta suuqa taala ee la heli karo, ma jirto koox faa’ido muuqata heleysa, sidaa darteed qaabka ugu sahlan ee su’aashan looga jawaabi karo waa in dib loo qoro su’aasha oo laga dhigo “yaa ku khasaaraya xil ka qaadista Kheyre”.
Dabcan qofka ugu horeeya ee ku khasaaray waa Farmaajo -xitaa hadii uusan isaga ogeyn- waxaana meesha ka baxay iskoor cusub oo farmaajo taariikhda u gali laheyd hadii ay xilka isla dhameysan lahaayeen, xaalka waxa uu marayaa sheekadii ciyaalka xaafadda ee aheyd “hebel ataxiyaadka ayuu ku dhuusay”.
Go’aanka xil ka qaadista Kheyre, waxa uu dalka Soomaaliya ku sababi karaa khalalaaso siyaasadeed iyo in ay sii bataan dhinacyada qeybta ah siyaasadda ku dhisan ciyaarta xarig-jiidka ee dalka ka socda.
Intaas oo dhan ka dib, waa in aan xisaabta ku darsanaa tallaabada xigta ee Barlamaanka iyo madaxweynaha, iyo falcelinta ra’iisal wasaarayaasha kan tagay iyo kan soo socda ayaa go’aamin doono sida dhabta ah ee xalka noqon doono, maalmaha ayaana wax badan ka sugeynaa.